What is mobile photography? - Myanmar End User
By Myanmar End User December 16, 2018 1150 views
Mobile Photography ဆိုတာ mobile ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေကိုသာမက Cybershot လို အပျော်တမ်းရိုက် Camera တွေနဲ့ရိုက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ Photography တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဒီ Articleလေးမှာတော့ Smartphone Photography အကြောင်းကိုအဓိက Share လုပ်ပေးသွားမှာပါ။ Smartphone တစ်လုံးမှာ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးကောင်းကောင်းရဖို့ ဘာတွေကအရေးကြီးသလဲ။ သူ့မှာပါတဲ့ features တွေက ဘာတွေလဲ။ Camera တစ်လုံးမှာ ဘာတွေပါသလဲ။ Aperture, Focal length, Exposure, Focus, ISO, Shutter speed ဆိုတာ ဘာတွေလဲ။ ဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲ။ ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်ပေးသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ နည်းနည်းလောက် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့…။
ပထမဆုံးအရေးကြီးတာက ဒီpost က Beginner တွေအတွက်ပါ DSLRလို pro camera သမား တွေ အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲလောက်မနက်နဲလို့ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်… လူတော်တော်များများ ရင်နှီးလေ့ရှိတဲ့အရာလေးပါ. Megapixel များရင် camera ကောင်းမယ် လို့ လူတော်တော်များများထင်တတ်ကြပါတယ်..အဲဒါဟာ 20%လောက်ပဲမှန်ပါတယ်. Camera တစ်လုံးကောင်းဖို့ Aperture, sensor size, sensor,တွေ အစရှိသည်ဖြင့် တွေကလည်း အရမ်းကိုအရေးပါပါတယ်.. Megapixel ဆိုတာက ပုံရိပ်ရဲ့ ချဲ့နိုင်အား ကိုအဓိကပြောချင်တာပါ.Megapixel များများနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံဟာ ပုံကြီးပိုချဲ့လို့ကောင်းပါတယ်.ဆိုလိုတာက DPI မြင့်မြင့်နဲ့ ပုံထုတ်လို့ရတာပါ.ဥပမာ 1.3mp ရှိတဲ့camera ကနေ ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံဟာ 4*3inch ရှိပီး 300dpi ဓာတိပုံတစ်ပုံကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်. Megapixel နဲလေ ထုတ်နိုင်တဲ့ပုံအရွယ်အစားကသေးလေပါ.ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ခြင်းမရှိပါ.ပြောရမယ်ဆိုရင် iPhone 8plus ရဲ့ 12mp နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံဟာ Nova 3i ရဲ့ 16mp ထက် ပုံထွက်အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်. megapixel က Nova 3i က ပိုများတာနော်.DSLRလောကမှာဆိုရင် Canon cameraတွေဟာ 12mp ထက် ပိုထုတ်တာရှားပါတယ်.တစ်ခါတလေ 10mp လောက်နဲ့တောင်ထုတ်ပါတယ်.
Nikon နဲ့ Canonမှာ Nikon က megapixel ပိုများများထုတ်ပေးပါတယ်.ဒါ့ကြောင့် ပုံတစ်ပုံကောင်းမကောင်းက Megapixel နဲ့သိပ်ပီးမသက်ဆိုင်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်.
အဓိကအားဖြင့် Smartphone camera တွေကောင်းမကောင်းကို ဆုံးဖြတ်ပေးတာက Sensorပါ.Smartphoneတွေအကုန်နီးပါးမှာ တပ်ဆင်ထားတာတွေကတော့ Sony sensorတွေပါပဲ IMX series တွေကို ထည့်သွင်းထားလေ့ရှိပါတယ်.IMX 363, IMX 376, IMX 486 စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်. အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့်တော့ နံပါတ်ကြီးလေ ပိုကောင်းလေပါပဲ. သို့သော် Sensor ကောင်းတိုင်းလည်း photoအရည်အသွေးပိုမကောင်းသွားသေးပါဘူး.
ဟုတ်ပါတယ် Megapixelတွေ sensorတွေ F တွေ တူနေတဲ့ smartphone နှစ်လုံးဟာ ပုံထွက် မတူနိုင်ပါဘူး. Smartphone companyတွေက ပြန်လည် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ enhance လုပ်ပေးတဲ့ softwareကလည်းအရေးကြီးပါတယ်.ဥပမာ ဂျာမဏီ camera companyကြီးဖြစ်တဲ့ Leica က co-engineer လုပ်ထားတဲ့ Huaweiရဲ့ P seriesတွေဟာ sensorတူညီတဲ့တခြားဖုန်းတွေထက် ပုံထွက်အများကြီးပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရမှာပါ. အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Vivo Oppoဆိုရင် Beauty effပါတဲ့ဘက်ကိုsoftwareနဲ့လုပ်ယူထားမယ်။Iphone တို့ Samsung တို့ဆိုရင် Natural ဘက်ကို သွားမယ်။ဒါကတော့ manufacturer နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။
တွေ့ဖူးပါသလား F1.9, F2.0 ဆိုပီး Smartphone camera specification တွေမှာ F ဆိုတာ f-stopပါ။
Aperture ဆိုတာက Lens တစ်ခုရဲ့ အကျယ်ပါ။ ပြတင်းပေါက်တစ်ခါဆိုပါစို့။ ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထားရင် အလင်းပိုဝင်မယ်။ ကျဉ်းကျဉ်းလေးဖွင့်ထားရင် အလင်းနဲနဲပဲဝင်မယ်။ Aperture ဆိုတာလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ ကျယ်ရင် အလင်းပိုဝင်ပီး အမှောင်ထဲမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ သတိထားရမှာက F1.8 သည် F2.0 ထက်ပိုကျယ်ပါတယ်။ ဂဏန်းငယ်လေ ပိုကြီးလေ လို့မှတ်ပါ။ Smartphone မှာ အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ F1.5 ကို Samsung Galaxy S9plus မှာတွေ့ပီးဖြစ်ပါတယ်။ Aperture ဟာ Focus လုပ်နိုင်စွမ်းမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်ပါသေးတယ်။ Wide ဖြစ်ရင် အနောက်ဘက်ကိုဝါးပေးတဲ့ creamy ပုံစံကို ရမှာဖြစ်ပီး ကျဉ်းရင်တော့ နဂိုအကြည်အတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Exposure ဆိုတာကတော့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ဘယ်လောက်လင်းတယ် ဘယ်လောက်မှောင်တယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ပေးတာပါ။ အလင်းထဲမှာ အရမ်းမှောင်နေတဲ့ image တစ်ခုကို underexposed ဖြစ်နေတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ သာမန်ထက် အရမ်းလင်းနေတဲ့ image တစ်ခုကိုတော့ overexposed ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Exposure ကို Lens ရဲ့ aperture, ISO, shutter speed တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ Manual mode ရိုက်လို့ရတဲ့Phone camera တွေမှာ shutter speed ပါပါတယ်။ 2s, 4s, 8s, 16s, 32s အထိ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ Shutter speed ဆိုတာ lens ထဲကို အလင်းဝင်တဲ့အချိန်ပမာဏကိုပြောတာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် shutter speed 4s ဆိုရင် အလင်းတွေဟာ 4sec လောက် camera ထဲကို ဝင်သွားမယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။ ကြာလေ လင်းလေပေါ့။ Shutter speed ကို2second ထိ တင်ရိုက်မယ်ဆိုရင် shutter button ကိုနိပ် 2sec နေမှ Camera က image ကို capture လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ 32 sec မှာ ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း 32 sec ကြာမှ capture လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သတိထားရမှာက Shutter speed အရမ်းမြင့်မြင့်နဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင်Tripod ကိုသုံးရမှာပါ။ လက်ရဲ တည်ငြိမ်မှုနဲ့ ရိုက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အမှောင်ထုထဲမှာ လင်းထိန်စွာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် shutter speed ကို 32s လောက်ဖြင့်ရိုက်ရင် မြင်ရပါတယ်။ DSLR မှာ သာမန်အမှောင်ထဲမှာ ISO မြင့်မြင့်နဲ့ ရိုက်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် Noise တွေ အရမ်းများလာပါလိမ့်မယ်။ Shutter speed က mobile photography မှာ တော်တော်လေး အရေးပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ Manual Mode ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် အသုံးပြုတတ်ရင် ဓာတ်ပုံကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ Huawei ရဲ့ Leica camera တွေဟာ Manual mode နဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင် အရမ်းအဆင်ပြေမှာပါ။ Point and shot အတွက်ကတော့ Google Pixel တွေ Iphone တွေက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျနော် အမှောင်ထဲမှာ auto mode နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ shutter speed 32 sec နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံနှစ်ပုံကို ယှဉ်ပြထားပါတယ်။ အမှောင်ထဲမှာ Still object တွေကိုရိုက်ဖို့ Exposure ကို မြင့်မြင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ တချို့Pro cameraman တွေကတော့ Landscape တွေရိုက်ဖို့အတွက်လည်း shutter speed မြင့်မြင့်နဲ့ LE ရိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
Smartphone တွေမှာ optical zoom ရဖို့ နောက်ထပ် Tele lens တွေ တပ်ပီး 2x zoom ဆိုတာကို iPhone7plus မှာ ပထမဆုံးချပြခဲ့ပါတယ်။ (ဟာ သားရီး အရင်ကလည်း ဖုန်းတွေမှာ zoomရပါတယ်ဟ..) မဟုတ်ပါဘူး။ အရင်ကရတာက image ကို crop လုပ်လိုက်ပီး zoom သဘောမျိုးလုပ်တာပါ။ တကယ် zooming လုပ်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက် blur ဖြစ်သွားတာတွေ ကိုတွေ့ရမှာပါ။ Optical zoom lensတွေကို တပ်ထားတဲ့အတွက် 2x zoom ကို ကြည်ကြည်လင်လင် ရလာပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Mate 20 pro မှာဆိုရင် 3x optical zoom lens တွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Digital zoom နဲ့ optical zoom ကတော့ Cybershot camera လေးတွေမှာပဲ သိသိသာသာ ထည့်သွင်းပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Optical 5x zoomတို့ Digital 50x zoom တို့ဆိုပီး ထည့်သွင်းပေးထားတာကိုမြင်ဖူးကြမှာပါ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် Digital zoom က software နဲ့ လုပ်တာဖြစ်ပီး။ optical zoom ကတော့ Hardware zoom lens တွေနဲ့လုပ်ဆောင်ပေးတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် optical zoom တွေက ပိုကောင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Manual mode မှာ ISO ဆိုတာလည်းပါပါတယ်။ ISO ဆိုတာကတော့ Camera က ဘယ်လောက် Light ထဲမှာ sensitive ဖြစ်လည်း ဆိုတာကို တိုင်းတာတာပါ။ ဥပမာ ISO 100 ဆိုတာ သိပ် sensitive မဖြစ်ပါဘူး။ Normal ISO လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဖုန်းတွေမှာ ISO 3200 ထိ အမြင့်ဆုံး ပါပါတယ်။ သူကလည် းအမှောင်ထဲမှာ ရိုက်ဖို့အတွက် အသုံးပြုတာပါ။ သူကတော့ အချိန်ယူစရာ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ISO မြင့်လေ Noise လို့ခေါ်တဲ့ အနီစက်လေးတွေများလေပါ။ Detail တွေလည် းပျောက်ကုန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Phone နဲ့ ရိုက်မယ်ဆိုရင် ISO တင်ဖို့ထက် Exposure time ကို မြင့်ပီးရိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ISO ကိုလည်း aperture နဲ့ shutter speed က ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
ဆယ်တန်း Chap (5) Lens အခန်းမှာ သင်ခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ Focal length ဆိုတာက Lens နဲ့ Object နဲ့ အကွာအဝေးပါ။ focal length ကို camera app မှာ F အကြီးနဲ့ ပြထားပါတယ်။ mm နဲ့ တိုင်းတာပါတယ်။ 10mm, 40mm, 400mm စသည်ဖြင့် တိုင်းတာပါတယ်။ ဥပမာ Focal length 10mm ဆိုရင် camera နဲ့ 10mm အဝေးမှာရှိတဲ့ object ကိုပဲ focus လုပ်ပေးမှာပါ။ အဲထက်ဝေးတဲ့ နေရာက အရာဝတ္ထုမှန်သမျှကို blur လုပ်ပေးမှာပါ။ Focal length 400mm ဆိုရင်တော့ camera lens နဲ့ 400mm အဝေးက obj ကို focus လုပ်ပေးမှာပါ။ Focal length ဆိုတာ focus လုပ်တဲ့ အကွာအဝေးကိုပြောတာပါ။
White balance ဆိုတာကတော့ camera တစ်လုံးရဲ့ color temp တွေ color မှန်ကန်မှုကို လုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ cool ဖြစ်ပီး အဖြူဘက်များတဲ့ camera တွေ warm ဖြစ်ပီး အဝါဘက်ရောက်တဲ့ camera တွေကိုလည်း smartphone တွေမှာတွေ့ရမှာပါ။ အခု နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ iPhone XS မှာ တော်တော်လေ းwarm ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့ photo တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ အများအားဖြင့် Pixel ဖုန်းတွေက White balance ကောင်းတဲ့ ဖုန်းတွေလို့မြင်မိပါတယ်။
Dynamic range ဆိုတာကတော့ darkest ဖြစ်တဲ့နေရာနဲ့ Lightest ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေနဲ့ color tones တွေကို ပြောတာပါ။ Dynamic range ကောင်းတယ်ဆိုတာကတော့ Dark နဲ့ light က ညီမျှတာကို ဆိုလိုပါတယ်။ မှောင်နေတဲ့နေရာကလည်း အရမ်း မမှောင်တော့သလို လင်းနေတဲ့နေရာကလည်း အရမ်းမလင်းပဲ object တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရတာကို Dynamic range ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပါ။Dynamic range ကို stop နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။
Credit to TextforTech